Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Waad ku mahadsan tahay booqashadaada Dugsiyada Aagga Robbinsdale iyo aragtida bayaanka asturnaanta. Bayaankani wuxuu ka hadlayaa ururinta, isticmaalka, amniga iyo helitaanka macluumaadka laga heli karo inta aad isticmaaleyso degelkan. Ogaysiiskani wuxuu daboolayaa mowduucyada soo socda:
Helitaanka iyo sixitaanka macluumaadka shakhsiyeed
Macluumaadka La Uruuriyay iyo Sida Loo Adeegsado
Ma ururin karno macluumaad shaqsiyadeed oo adiga kugu saabsan mooyee inaad si ikhtiyaari ah uga qayb gasho nashaad weydiisanaya macluumaad (tusaale ahaan, buuxinta foomka Websaydhka, diiwaangelinta dhacdo ama ka qaybgalka sahan). Haddii aad dooratid inaadan kaqaybqaadan waxqabadyadan, doorashadaada sinnaba uma saameyn doonto awooddaada inaad adeegsato astaamo kale oo ka mid ah websaydhada Dugsiga Aagga Robbinsdale ama awoodda aad ugu leedahay helitaanka adeegyada Dugsiyada Robbinsdale Area.
Xaaladaha laga yaabo in lagu weydiiyo inaad bixiso macluumaad shakhsiyeed waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Liisaska E-maylka: Haddii aad iska qorto mid ka mid ah liistadayada e-maylka waxaan weydiisan karnaa macluumaadka sida macluumaadka xiriirka, cinwaanka e-maylka iyo macluumaadka la midka ah. Macluumaadka aad bixiso waxaa loo isticmaali doonaa in laguugu qoro adeegga liiska e-maylka lagana hubiyo inaad hesho e-maylka la codsaday iyo noocyada kale ee macluumaadka la midka ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedooyinka lagu sharxay qaybta hoose ee cinwaankeedu yahay Bixinta Macluumaadka. Haddii aad iska qorto liiska e-maylka, macluumaad qaas ah ayaa la bixin doonaa oo sharraxaya sida looga baxo adeegga liiska e-maylka.
Foomamka iyo Sahaminta Websaydhka: Websaydhka Dugsiyada Robbinsdale Area ayaa laga yaabaa inay ku siiso fursad aad ku buuxiso foomamka iyo sahannada, sida foomamka codsiga macluumaadka iyo foomamka jawaab celinta. Macluumaadka la codsaday waxaa ka mid noqon kara waxyaabaha sida macluumaadka xiriirka, macluumaadka dadka, meelaha xiisaha leh, sida aad ugu qanacsan tahay adeegyada Dugsiyada Aagga Robbinsdale iyo noocyada kale ee macluumaadka la midka ah. Macluumaadka shaqsiyeed ee aad bixiso waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya ujeeddooyin sida lagu sharaxay barta ururinta, sida in laguu soo diro macluumaadka ama lagu qiimeeyo guusha barnaamijyada Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedooyinka lagu sharxay qaybta hoose ee cinwaankeedu yahay Bixinta Macluumaadka.
Adeegyada Koontada: Websaydhka Dugsiyada Robbinsdale Aagga ayaa laga yaabaa inay ku siiso adiga fursad aad ku gasho adeegyada koontada, sida diiwaangelinta fasalka, kirada xarunta, dheelitirka koontada adeegga cuntada iyo iibsashada khadka tooska ah ee dukaanka dugsiga. Macluumaadka la codsaday waxaa ku jiri kara waxyaabaha sida macluumaadka xiriirka, macluumaadka dadka, macluumaadka sirta ah iyo macluumaadka lacag bixinta. Macluumaadka waxaa loo isticmaali doonaa ujeedooyinka lagu sharaxay barta ururinta, sida si loo helo koontadaada iyo habka lacag bixinta. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedooyinka lagu sharxay qaybta hoose ee cinwaankeedu yahay Bixinta Macluumaadka.
Marka lagu daro macluumaadka shakhsi ahaaneed ee kor lagu sharaxay, nidaamkayagu wuxuu ururiyaa xogta log server kaas oo ay ku jiri karaan cinwaanka IP, nooca biraawsarka iyo nidaamka hawlgalka loo isticmaalo, waqtiga maalinta la booqday, bogagga la arkay iyo macluumaadka lagu codsaday raadinta. Waxaan ururinay xogtaan waxaanan u adeegsanaa ujeedooyin tirakoob, inaga oo naga caawinaya inaan hubino, tusaale ahaan, inta ay leegtahay xiisaha loo qabo qaybo ka mid ah boggeena internetka iyo siyaabaha lagu hormarin karo socodka iyo waxyaabaha ku jira degelkeena.
Nooc kale oo ka mid ah macluumaadka isticmaalaha websaydhka ah ee aan soo ururinno ayaa loo yaqaan "cookie". Cookie waa fayl qoraal yar oo macluumaad ah oo adeegahayaga shabakadu ku kaydiyo kombuyuutarkaaga si loo kala sooco booqashadaada bartayada iyo kuwa kale ee laga yaabo inay soo booqdaan bartayada isla waqtigaas. Cookie-kani wuxuu shaqeynayaa oo keliya inta kumbuyuutarkaagu booqanayo bartayada oo aan loo isticmaalin ujeeddooyin suuq-geyn ama sabab kasta oo wax u dhimi karta asturnaantaada. Tusaale ahaan, Check Check service wuxuu adeegsadaa cookies si loo hubiyo in kombiyuutar kasta loo diro bogga saxda ah ee macluumaadka ay hadda codsanayaan. Kukiyada sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu ogeysiiyo haddii kumbuyuutar ka mid yahay bogaggayada. Marka laga soo tago ahaanshada, cookies-ka ayaa lagu wadaa inuu dhacayo marka aad xirto biraawsarkaaga. Dugsiyada Aagga Robbinsdale ma isticmaalaan cookies-ka joogtada ah (cookies-ka lagu hayo kumbuyuutarkaaga ka dib markaad xirto biraawsarkaaga).
Qaar ka mid ah macluumaadka la aqoonsan karo ee shakhsiyadeed ee aad ku bixiso liistada emaylka, foomamka websaydhka iyo sahannada iyo adeegyada koontada ayaa loo kala saari karaa inay yihiin xog gaar loo leeyahay. Xogta waxaa lala wadaagi karaa shaqaalaha iyo wakiillada Dugsiyada Aagga Robbinsdale hadba sida loogu baahan yahay si loo bixiyo adeegga gaarka ah ee loo codsaday, si loola socdo guusha barnaamijyada, si loo dhammaystiro warbixinnada looga baahan yahay gobolka iyo federaalka iyo in la ilaaliyo shaqada iyo amniga nidaamyada Dugsiyada Robbinsdale. Lama wadaago meel ka baxsan Dugsiyada Aagga Robbinsdale mooyee sida sharcigu oggol yahay mooyaane.
Macluumaadka qaar si elektiroonig ah loogu gudbiyo waxaa lagu sifeeyay inay yihiin xog elektiroonig ah oo gaar loo leeyahay. Xogta helitaanka elektaroonigga ah looma kireysan karo ama looma iibin karo dhinacyada saddexaad lamana wadaagi karo banaanka Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale marka laga reebo ujeedooyinka soo socda:
Ku socota Wakiilka Waaxda Maamulka ujeedooyinka qiimeynta adeegyada elektiroonigga ah ee dowladeed;
Hay'ad kale oo dawladeed si looga hortago loona jawaabo faragalinta sharci darrada ah ee nidaamka elektaroonigga ah ee dowladda iyo howlaha kale ee sharci darrada ah, iyo
Sidii kale waxaa bixiyay sharci gaar ah oo gobolka iyo federaalka ah oo u baahan ama si cad u oggolaanaya sii deynta xogta gaarka ah.
Lama aqoonsan karo, macluumaadka kooban looma kala saari karo inay yihiin kuwo gaar loo leeyahay waxaana lala wadaagi karaa dhinacyada saddexaad. Isku soo wada duuboo, xogta kooban ayaan u oggolaan doonin dadka kale inay ku aqoonsadaan.
Qaar ka mid ah macluumaadka la aqoonsan karo ee aad soo gudbiso waxaa loo kala saari karaa inay yihiin xog dadweyne. Xogta dadweynaha waxaa si xor ah u heli kara dhinacyada saddexaad.
Helitaanka iyo Toosinta Macluumaadka Shakhsiyeed
Waad dib u eegi kartaa wixii macluumaad shakhsi ah ee aan kaa aruurinno. Waxaad kugula talin kartaa isbeddelada macluumaadkaaga shaqsiyeed ee aad aamminsan tahay qaladka adoo soo gudbinaya codsi qoraal ah oo si kalsooni leh u muujinaya qaladka. Haddii aad rumeysan tahay in macluumaadkaaga shaqsiyeed loo adeegsanayo ujeedo kale oo aan ahayn tii la rabay markii la gudbiyey, waad nala soo xiriiri kartaa. Xaaladaha oo dhan, waxaan qaadi doonaa talaabooyin macquul ah oo aan ku xaqiijineyno aqoonsigaaga ka hor intaanan siinin helitaanka ama sixitaanka.
Si aad uga bixiso faallooyin ku saabsan websaydhka Dugsiyada Robbinsdale Area, ama ku saabsan macluumaadka lagu soo bandhigay Ogeysiiska Asturnaanta, waxaad la xiriiri kartaa: